अब मोबाइलबाटै ट्राफिक जरिमाना भुक्तानी गर्न सकिने : RajdhaniDaily.com sharethis
प्रविधिमा ट्राफिक प्रहरीको फड्को
पछिल्लो समयमा स्मार्टफोनमै क्यूआर कोड स्क्यानरको सुविधा उपलब्ध हुन थालेको छ । यसले यो प्रविधिको प्रयोग सजिलो र सुविधाजनक भएको छ ।
यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउनेविरुद्ध रातको समयमा पनि कारबाही सुरु गरेको छ । रातको समयमा तीव्र गतिमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटना बढ्न सक्ने भन्दै महाशाखाले ‘नाइट भिजन लेजर स्पिड गन’को प्रयोग गरी जाँच अभियान थालेको हो ।
महाशाखाका अनुसार कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक तथा चक्रपथ क्षेत्र र चौडा भएका सडकमा सो अभियान थालिएको छ ।
त्यसो त ट्राफिक प्रहरीले लामो समयदेखि दिउँसोको समयमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने ३५-४० जना चालकलाई लेजर गनमार्फत कारबाही गर्दै आएको छ । सो अभियान प्रभावकारी भएपछि रातको समयमा पनि सुरु गरिएको हो । भट्टराई नाइट भिजन लेजर स्पिड गनको प्रयोगले तीव्र गति नियन्त्रणका साथै रातको समयमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिए ।
छाेरी जन्मिनै पाउदिनन्, भ्रुणमै हत्या गर्छन् बाबु आमा चिकित्सक नै संक्रमित भएपछि त्रास बढ्यो सीआईबीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन किन भयो फिर्ता ?
एमाले बैठकका निर्णय किन सार्वजनिक हुन सकेन ?
मारियासँग ‘टर्मिनेटर’ स्टार आर्नोल्डको सम्बन्धविच्छेद
होटल सब्रिनाले पायो ‘बेष्ट नेपाल होटल अवार्ड’
एमाले जिल्ला अधिवेशन आज
नेकपामा विवाद: सत्ता केन्द्रित कि पद्धति ?